Gini bu mkparita uka na UNWTO / ICAO Ministerial Conference on Tourism and Air Transport?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Cabo Verde na -agbasa » Gini bu mkparita uka na UNWTO / ICAO Ministerial Conference on Tourism and Air Transport?
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Cabo Verde na -agbasa • Akụkọ Ọchịchị • investments • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Mkparịta ụka Panel na-aga n'ihu ma na-akwado mmemme taa maka ndị nnọchi anya na Sai Island, Cabo Verde na-aga na mbụ UNWTO / ICAO Ministerial Conference Tourism na Air Transport.
Usoro ụgbọ njem na njem nlegharị anya: usoro iwu na-achịkwa iji bulie ma kwado uru ha
Transportgbọ njem ụgbọ elu na njem nleta na-adabere na ibe ha ma bụrụ ngwa ahịa azụmaahịa na uto akụ na ụba maka mba mepere emepe na mba na-emepe emepe.
N'agbanyeghị mmekọrịta, enwere ike inwe esemokwu n'etiti amụma ụgbọ elu na nke njem n'ihi ihe isi ike nke Steeti iji dozie ọdịmma nke ụgbọ elu ha na mmepe kachasị mma nke ụlọ ọrụ ndị njem ha. Policieskpụrụ nke usoro dị iche iche na-ebute nkebi njikọ, nke bụ nnukwu ihe na-egbochi mmepe nke ngalaba abụọ ahụ. Kedụ ka anyị ga - esi mee ka mmekọrịta dị n'etiti ngalaba abụọ ahụ wee kwekọọ, mebe usoro nhazi, ma gbochie atumatu ngalaba dị iche iche? Kedu ka anyị ga - esi nwee nguzozi iji bulie eleba anya na njem njem na ụgbọ elu na akụnụba mba?
Kedu ọnọdụ usoro usoro iwu nke Africa ugbu a yana mmetụta ya na njem na njem ụgbọelu (Nkwupụta Lomé na atụmatụ metụtara ya metụtara ma ụgbọ njem ụgbọ elu ma njem njem?
Kedụ ka Afrịka ga-esi erite uru ma mejuputa nkwupụta UNWTO na ICAO Medellín na njem na njem ụgbọelu maka mmepe? Kedụ ka gọọmentị ndị Afrịka ga-esi kwalite mmekorita na ime mkpebi ga-ekwekọ n’etiti ndị njem na ndị njem na ndị ministri ndị ọzọ na-ahụ maka ọrụ metụtara ya, gụnyere ego, atụmatụ akụ na ụba, ike, gburugburu ebe obibi na azụmaahịa?
Kedu ihe ịma aka ndị ndị njem metụtara njem nlegharị anya na-egosipụta n'achụmnta ego azụmahịa ndị njem na mba na mpaghara ụgbọ njem ụgbọelu?
Njikọta na njem na-enweghị ntụpọ: Omume kachasị mma iji jeere ndị njem nleta na ndị njem
Gbọ elu na njem nleta bụ mpaghara akụ na ụba nke ndị ahịa.
Ọ bụ ezie na enweghị nkọwa ọ bụla nke njikọ ikuku, enwere ike ile ya anya dị ka ikike nke netwọkụ iji mee ka ndị njem metụtara nke kacha nta nke ụzọ isi na-agafe, nke na-eme njem ahụ dị mkpirikpi dịka o kwere mee na afọ ojuju ndị njem kachasị mma na ego opekata mpe. Ghọta njem na-enweghị atụ nwere ike imeziwanye ahụmịhe njem njem, nke na-eme ka ndị njem na-achọ njem.
Site na mmalite nke Single Africa Air Transport Market (SAATM) n'oge na-adịbeghị anya, mbara igwe mepere emepe n'Africa nwere ike bụrụ eziokwu n'oge na-adịghị anya, na-ewu usoro iwu dị mkpa iji mee ka njem intra-Africa dị n'etiti mba ụwa.
Kedụ ka anyị ga - esi bulie usoro ndị njem n'ụgbọ elu ikuku? Kedụ ka anyị ga - esi wepụta ihe zuru ezu maka ọrụ ikuku n'etiti mpaghara mpaghara Africa, ọkachasị n'etiti mpaghara ọwụwa anyanwụ Ọwụwa Anyanwụ?
Ruo ókè ha a airaa ka nkwekọrịta ọrụ ikuku dị ugbu a (ASAs) na-atụnye ụtụ na njikọta yana kedụ atụmanya nke nnwere onwe ịkwagharị ikuku? Kedu ihe na-akpata nsogbu na nkwụsị nke njem na-enweghị ntụpọ na sistemụ ụgbọ elu? Kedu usoro nhazi usoro enwere ike iji ma ọ bụ mepụta iji kwado ọrụ ikuku dị mkpa maka mba ndị mepere emepe (LDCs), Mba Ndị Na-emepe emepe (LLDCs) na Small Island Developing States (SIDS)?
Kedu usoro omume kachasị dị ugbu a na kedu ka a ga-esi gbasaa ma gbanwee ya na mpaghara ndị ọzọ? Kedu ihe ndị na - emetụta nhọrọ nhọrọ ụgbọ elu maka ngalaba ahịa dị iche iche (akụkụ dị iche iche)?
Ego na Ego maka Development: Pragmatic jikoro na-ewu a uzo, mụ na predikte ukeme idụhe
Enweghị akụrụngwa nke akụrụngwa na ụgbọ elu na njem njem abụrụla ihe esemokwu n'Africa. Ọ bụ ezie na atumatu dị iji zụlite ma mee ka akụrụngwa ụgbọelu dị ugbu a, ọ ga-aka mma ma ọ gafechaa ọtụtụ afọ.
Ka ọ dị ugbu a, ohere ga-efunahụ maka ịmepụta ọrụ na ịkwalite uto akụ na ụba. Okwu ọzọ bụ mmụba ụtụ isi na njem na njem ụgbọelu n'agbanyeghị na ụlọ ọrụ ahụ na-ewepụta imirikiti mmefu akụrụngwa nke onwe ya site na ịkwụ ụgwọ nke ụgwọ ndị ọrụ, kama ịkwụ ụgwọ site na ụtụ.
Ego a na-enweta site na ụtụ isi na-akarịkarị uru elele akụ na ụba ndị a napụrụ aha ya n'ihi nnweta agụụ maka njem ụgbọelu.
Oge a ga-elekwasị anya
) imepụta ezi ọchịchị na ime ka gburugburu nwee obi ike azụmaahịa na ịgba ume itinye ego, yana
b) nhazi nke atumatu na mmepe iji kwado onodu ugbo elu na njem nlegharị anya na atumatu otutu ndu na ime obodo. Kedu ihe ịma aka nke ịkwado ọrụ mmepe metụtara ọrụ njem na njem ụgbọelu, ọkachasị na LDCs, LLDCs, na SIDS?
Kedu ihe bụ ihe ịga nke ọma n'ịkwụ ụgwọ njem na njem ụgbọ elu? Kedu ka ndị na-azụ ahịa si ahụ ụtụ isi, ụgwọ, na ụgwọ ndị ọzọ yana otu esi eme ka a mata na ụtụ isi na ebubo akwụghị ụgwọ ndị njem na ndị njem?
Kedu ihe kpatara oke ego nke mba ụwa na enyemaka maka mmepe ugbu a maka ọrụ ụgbọelu na njem ndị njem?
Igha njem njem: Advanga n’ihu maka ịkwalite visa iji kwado mmepe akụ na ụba
Ime njem na ebumnuche iji bulie arụmọrụ nke usoro mkpocha oke ala ma nweta ma chekwaa nchekwa dị elu na ndị mmanye iwu dị mma. Ikwe ka ndị njem / ndị njem gafere ókèala mba ụwa n'enweghị nsogbu ma rụọ ọrụ nke ọma na-enye aka n'ụzọ dị ukwuu na-akpali akpali ọchịchọ, ịkwalite asọmpi nke States, ịmepụta ọrụ na ịkwalite nghọta mba ụwa.
N'agbanyeghị nnukwu ọganihu e mere n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya iji kwado njem njem nleta na Africa, a ka nwere ohere maka nnukwu ọganiihu. Iji maa atụ, usoro visa eletrik na nnyefe nwere ike ime ka njem dị mfe, adaba, ma rụọ ọrụ nke ọma na-enweghị mbelata nchekwa mba.
Steeti kwesiri ileba anya na mmekorita na mmekorita nke ndi isi, mpaghara na nke mba ozo. Kedu ka esi eji teknụzụ ọhụụ iji mee ka njem dị mfe, adaba ma rụọ ọrụ nke ọma? Kedu otu esi akọwa ma mejuputa atumatu nke na-akwado njem mba na njem nleta na-eme ka nchekwa na iguzosi ike n'ezi ihe nke njirimara ndị njem na njikwa ókè?
E-paspọtụ, e-visa na akwụkwọ ndị ọzọ na-eme ihe iyi egwu nke nchekwa? Kedu otu mba Africa ga - esi mụta ihe site na omume ndị ọzọ dị mma?